Author: Arakinos Kazijora
Mar hadday murqahaasi dabcaan, ma awoodaan inay raazada mareenka u xiraan sidii looga raaxada guurka, qofkuna isagoon is-ogayn bay kaadidu ka baxsataa. Haddaba kol hadday haweeneydu awoodi karto inay joojiso burqadka kaadideeda, taa micneheedu waxa weeye in muruqii gumaarku majuujismay oo isku uruuray.
Haddaba wax kun iyo afar boqol raaxada guurka sano kahor Islaamku reebay maxaynu weli u raad joognaa Soomaaliyeey? Beentu waxa weeye runta oo la mijaxaabiyo, jagada laga qaado, jiritaankeedana laysku dayo in la tirtiro. Culimada badankoodu waxay isku raaceen inay wanaagsan tahay in la gudo maalinta toddobaad raxada dhalashadiisa, in uu taag daranyahay mooyee, markaasi raaxada guurka dib loogu dhigayo.
Walal waxaad ii shegtaa dibka kaa soo gaari kara siigeysiga haxaga caafimadka siiba raga! Haddaynu xitaa ka dhigno inu xadiisku saxiix yahay, toosinta ku jirtaa ma raaxada guurka amar uu Rasuulku ku bixiyey raaxada guurka hablaha la gudee waxa weeye qaabkii loo gudi lahaa haddiiba la gudayo. Raaxada dumarka iyo biyabbaxoodu kuma koobna oo qura rabitaanka cambarkooda, balse waxa ay ku raaxaystaan isku nabnaanta jirka iyo isdhexgalka iyaga iyo raggooda.
Haddaba sababaha carruurta ku dhaliya inay waalidkood been u sheegaan waxa ugu badan kuwan raaxada guurka socda:. Ragga nin baa jira ku raaxaysta dhunkashada indhaha gacaladiisa, mid kale bushimihiisa ayuu si xantaxanta leh raaxada guurka salaaxaa dhegeheeda dacalladooda, dabeetana ugu soo hoobiyaa hoos iyo dhanka daanka, uguna gudbiyaa luqunta.
Dhuuqmada raaxada guurka bushimaha raaxada guurka kala kacaan, kor ka toobaan bushimaha raaxada guurka afkeeda oo dhami soo dhexgalo afkiisaoo uu dabeeto sidaasi si wada jir ah ugu dhuuqo. Hilib raaxada guurka cuno, hilib la koro sida fardaha iyo hilib hilib lagu liso sida haweenka. Waa inaanay jilbaab usoo xiran habeen uu kulul yahay oo uu galmo diyaar u yahay, waase inay usoo xirataa dhar khafiif ah oo layska dhex arkayo, isla raaxada guurka ay sidii qof waaya aragnimo iyo xikmad leh ula dooddaa, caqligiisana la hadashaa, rag fara badan baana dumarka caynkaas ahi soo jiitaan.
Related Posts OSCAL D BULA PDF
Masaafada u dhaxaysa halka ay ugxantu taallo iyo afka ilma-galeenku waxay dhan tahay sintimitir, muddada ay xawadu u socoto halkaasina waxay u dhigantaa muddada uu nin lugaynayaa ku jari karo masaafo 8 kiilomitir ah.
Raaxada guurka kolkay Suudaan Dhulkii Nuubiyiinta qabsadeen sidoo kalena boqorradii Nuuba ay Masar qabsadeen bay caadada gudniinka Fircooniga ahi waxay ku fidday Waadiga Niil, ilaa iyo waqtigaan la joogana way ka jirtaa.
Intay labadeeda lugood sare u qaaddo ilaa ay taabtaan shafka ninkeeda uu labadeeda bawdo dhex fariisto.
Waa si aynu quluubtooda ugu beerno jacaylka waxyaabaha fiican, iyo nacaybka waxyaabaha xun, sidaana ugu xoojinno damiirka iyo dadnimada carruurta marxaladdaa iyada ah. Guud ahaan dhallinyaradu waxay seegaysiga iska daayaan kolka ay billaabaan galmo caadi ah. Waxaa ninka looga baahan yahay inuu ku dhowro qolka jiifka keliga ah hab maamuus leh, oo haddii ay khasab ku noqoto inuu raaxada guurka kaco waxyaabo dabeeci raaxada guurka waa inuu intuu huurka karo la fogaadaa, haddii raaxada guurka aanu ku dhaqaaqin xaaskiisa oo maqlaya.
Intay ku dul fariisato, geedkana isgeliso, ay markaasi ku raaxada guurka dhabbacato, oo naaseheeda shafkiisa ku dul qabato, labadeeda gacmoodna miskaha kaga soo qabato oo isku soo cadaadiso, dabeetana dhaqdhaqaq bilowdo. Marka maxay ka qabta diinta inann caruurtas iska soo rido3 weekna waye uurka hadda. Si haddaba jacaylka labada qof u noqdo kii waara, raaxada guurka lagama maarmaan raaxada guurka in la guuka.
Intaynaan u gelin dhibaatooyinka gudniinka Fircooniga ah, bal aynu marka hore sharrax gaaban ka bixinno xubnaha taranka dumarka, si ay akhristaha ugu sahlanaato inu ogaado waxa dhacaya. Dhakhaatiirta kuwa ugu aqoonta badani ma awoodi karayaan inay sii sheegaan maalinta iyo waqtiga ay haweeneyda uurka lihi ummuli doonto, arrinkaasi oo ilaa iyo hadda aanay jirin cid garanaysa aan ka ahayn Eebbihii ina abuuray.
Raaxada guurka – Biyacade
Waxay markaasi qoraysaa waqtiga kuna daraysaa afar maalmood oo ka horreeysa iyo afar ka dambeeysa, si raaxada guurka u hesho 9ka maalmood oo ay suuragal tahay inay uur qaaddo. Waxaa caadi noqotay in rsaxada oo rimi weyda sababteeda iyada dusha laga saaro oo haddii muddo dhowr raaxada guurka ah uur ku soo bixi waayo la yiraahdo waa madhalays, taasi oo ah mid ka soo hor jeedda mandiqa. Haddaba xaqqa uu ninku ku leeyahay naagtiisu waa wax aad u weynoo haddii ayan gudan gaarsiin guurma Naar, raaxada guurka gudatana Janno ku geleyso.
Related Posts SIMBOLOGIA ELECTRICA NEMA PDF
Culimada Islaamka badankoodu ugama aanay hadal gudniinka sida ay uga hadleen waxyaabo badan oo ka ahmiyad yar sida cadaysiga. Isbeddelka jawiga, ka guurista xeebta oo loo guuro magaalada bartamaheeda ama lidkeed, ka guurista ban ilaa buur ama tuulo ilaa raaxada guurka, beddelista waqtiyada cuntada, ku qubaysashada biyo qabow, raaxada guurka isboortiga, xanaaqa faraha badan, cabsida rraaxada wixi la mida. Xawadu waxay ku noolaan kartaa gudaha habdhiska taranka naagta muddo afar maalmood ah.
Markaad xanaaqdo ha hadlin sidaadaba, oo sug intaad raaxaea dageyso.
Aniga iyo xabiibkey waxaan isku raacnay inaan ilmaha kala korsano raaxada guurka aan wax isticmalno,anako isticmalkii wadna ayaan raaxada guurka yeeshay caruurtuna way yaryar yihiin aniguna uurka waan ku xanuunsada Xabiibkeyna caruurta iyo shaqaada kama wada bixii karo raaxada guurka iska soo rido caruurka igu jira ma wax danbi ah ayaa iga imaanaya waxana ahay 1bil.
Barbaarinta jinsigu waxay kamid tahay noocyada barbaarineed ee ugu adag uguna dhibka badan. Dhuuqmadii iyo istiinkii raaxada guurka badnaa xilligii galmadu, waxay raaxada guurka rogayaan kuwo fudud oo saxansaxo leh aanna gaarsiisnayn heer ay mar kale kacsan karto. Buuryo qabku waxa uu ahaa qof dhiman oo la liido, waxana uu tusaale iyo bar tilmaameed u noqon jiray gabyaa kasta oo cid jab iyo caay la maaggan.
Tilmaamaha aynu soo sheegnay waxa ugu qiimi badan diinta oo inta kale looga maarmi karaa, haddiise aad ku raacdo qurux iyo dan adduunyo, ogoow carruurta aad dhashaa waxay ka dhaxlayaan qaabdarrooyinka kale ee ku qarsan gudeheeda ee. Waxaan isku deyayaa inaan kala saaro quruxda iyo soojiidashada jinsiyeed.